FJ6-JTS2EB Telo Faha-telo Tiorin-droa Tiny misy tariby mampitohy ny tariby miakatra: 25 mm sq - Fanapahan-dàlana Haiyanina China Haiyan
FJ6-JTS2EB Telo Fasa Telo Fefatra Telo DIN lalamby misy fifandraisana an-tariby max inlet tariby: 25 mm sq
FJ6S andian-tsofina fampiatoana andian-dahatsoratra FJ6S (karazana elaborate) dia natao manokana amin'ny fantsom-pifandraisana mahazatra amin'ny fitaovana fampielezana herinaratra isan-karazany, seta feno, boaty metatra haingam-pandeha ary boaty boaty fiasana karazana. Ny volavolan-tsitran'ny insulation dia miverina amin'ny 690V, manome volavolan-jotra 380V, miantso 630A ankehitriny. Ny faran'ny fidirana dia azo ampifandraisina amin'ny mpilalao amin'ny 6mm 2~ 185mm 2 amin'ny faritra, ny faran'ny fivoahana 2.5mm 2~ 185mm 2sy ny tariby. Ny vokatra dia manana tombony amin'ny firafitry ny novelomanina, ny fantsom-pitokisana azo itokisana, fampiasa mora.
FJ6S andian-tsindrim-peo FJ6S dia amboarin'ny herinaratra elektrika, insulator amin'ny bench ary fiarovana ny fiarovana. Ny vatana mitambatra dia mandrafitra ny fomba fanamboarana rafitra fananganana rafitra, miaraka amin'ny fananganana mivaingana, endrika kanto ary firafitra azo itokisana. Ny faran'ny fidirana dia afaka mifandray miaraka amin'ny conducteur (fametrahana tsotra) na fivoahana amin'ny terminal OT (làlana andalana) ary mifandray amin'ny fantsom-pifandraisana. Izahay dia manamboatra ny fehikibo be herim-po amin'ny alàlan'ny zotra fanaovan-gazety, ary mampiasa ery ambanin-tany manokana, izay manome antoka tsara ny tsindry amin'ny tsindry amin'ny mpanao gazety nefa tsy manimba azy, ary manome antoka fa azo antoka azo antoka.
Fametrahana sy fandidiana
Ity andiany andiany ity dia manome karazany roa toy ny fomba fametrahana: 1. karazana miorim-batana, drill hole ao amin'ny takelaka ambany ary mametraka mivantana.Mounting screw dia M5; 2. Fametrahana karazana fiaran-dalamby, apetaho amin'ny lalamby TH-35. Manolo-kevitra izahay ny hampiasa tsipika marobe ho toy ny tariby anatiny, rehefa ampidiro amin'ny fantsom-baravarana ny mpitazona, alao antoka fa tokony hampidirina tsara ilay konditera izay ahafahanao manaparitaka ilay bolanao, fa raha tsy izany dia mety hanana fifandraisana diso ianao. Rehefa somary kely ny faritra fizarana tariby anatiny, fa ny ampahany amin'ny insulation ny tariby dia azo averina ao anaty lavaka fifandraisana, eo amin'ny fiandrandran'ny fahatongavana azo itokisana, ny sisan-tsindrimandry dia mahazo miditra ao anaty lavaka fifandraisana. Rehefa te-hanokatra ny saron-trano fiarovana ho an'ny fandidiana na mihazona azy fotsiny dia arotsaho fotsiny ny fonon'ilay rakotra fiarovana amin'ny alàlan'ny tanana hanala ny sarony, na ampidiro ao anaty lapping amin'ny alàlan'ny mpamily kiraro ary aza mihodina mora hialana ny sarony.
Rehefa mametraka baiko dia aseho azafady ilay modely (na baiko No.) sy ny habetsahana. FJ6S seranan-tsambo sisintany dia azo ampiharina miaraka amin'ny habetsaky ny lalantsara tsy misy fenitra sy fatran-tsabatra.
FJ6S-1 -fam-pamakiana marika DIN karazana ...
FJ6SF-1 andian-tsarintany tokana maromaro-DIN fiaran-dalamby ...
FJ6-JTS2EB Toro tokana DIN misy karazana lalamby ...
FJ6-3 Fomba fihenam-bidy marobe efa misy tanjaka
FJ6SF-2 andiany roa-famokarana serivisy DIN roa ...
© Copyright - 2010-2019: Zo rehetra voatokana. Tohanana ara-teknika: globalso